nexus 6 pa & t inonzi yakatanga kugamuchira iyo Android 5.1 lollipop yekuvandudza
Kuru Nhau & Ongororo Nexus 6 paAT & T inonzi yakatanga kugamuchira iyo Android 5.1 Lollipop yekuvandudza
Nexus 6 paAT & T inonzi yakatanga kugamuchira iyo Android 5.1 Lollipop yekuvandudza
Google Nexus 6 inyanzvi yekuvandudza nekuti Google iri kuita kuti chigadzirwa chiwanikwe kune vese vanotakura. Izvi zvakatora akawanda eakachena-Android akatendeka zvishoma nekushamisika nekuda kwekuti vatakuri vakabata sei iyo Samsung Galaxy Nexus makore mashoma apfuura. Kuwedzeredzwa kwaive kusiri yunifomu, kushambadzira kwanga kwazara, uye ngatirege kukanganwa, bloatware.
Pasina mubvunzo kutaura, izvo zvakashatisa iyo & ldquo; yakachena & rdquo; chiitiko icho Nexus yaifanira kuendesa. Nehurombo panguva iyoyo, Google yaigona kunge isiri mune chero chinzvimbo chekumanikidza nyaya nevatakuri vakaita saVerizon panguva iyoyo.
Izvo zvachinja sezviri pachena neNexus 6 zvakadaro. Zvese zvishandiso zveNexus 6 mumusika weNorth America zvine zvivindi zvakafanana, mawairesi akafanana, uye zvinoita sekunge Google inogona kunge iine hutongi hwakawanda pamusoro pekusundira kunze kwehurongwa hwekuvandudza - kunyangwe ikozvino, tichachengetedza kutonga.
Verizon & rsquo; s Nexus 6 inouya neshanduro yazvino yeApple, 5.1, pabhodhi, saka isu tichafanirwa kumirira kuti tione kana gadziriso inotevera ichigovaniswa nekukurumidza. Zvichakadaro, mumwe mutakuri asingazivikanwe nekugonesa iyo inomhanyisa yekuvandudzwa kubva kuOEMs ndeye AT&T. Iyo yaizoita sei iyo AT & T yakanzi Nexus 6 famba neiyo Android 5.1 kugadzirisa ?
Zvakanaka, zvinoita sekunge mutsetse weNexus uri kumusoro-uye-kumusoro kweyekuvandudzwa kubhodhi sevamwe vatengi veAT&T neNexus 6 vatanga kuona iyo yekuvandudza yakapihwa kune yavo kifaa. Denoting kuvaka nhamba LMY47D, yakafanana kuvaka iyo iriko parizvino kusundira kuNexus 5 .
Tichifunga izvo zvave zviri pachena inguva yekukura kweiyo yakachena-Google mushandisi base, izvi zvidzoreso zvehurongwa zvinopihwa muzvikamu kune zvisina kujairika zvishandiso. Kana iwe usina kugashira chiziviso cheyekuvandudza, tarisa kuti uwane zvigadziriso mumamiriro. Kana izvo zvikasashanda, iwe unongoda kumirira iyo OTA , sezvo paine nzira kuGoogle & rsquo; s kupenga.
zvinyorwa: Android Vakomana kuburikidza Misoro ye Android
mitambo yakanakisa ye galaxy s7
Apple yakapomera mhosva yekuramba kugadzirisa yakakuvara-mvura iPhone
Kuvhura nekuvhara tabo pane iyo Android vhezheni yeChrome zvava nyore zvishoma
Stranger Nhema Chishanu: Iyo Galaxy Cherechedzo 10 yakachipa pane yekare Cherechedzo 9 kuSamsung
Jet Nhema iPhone 7 Plus inogona kutumira munaNovember shure kwezvose